Zaza mihaza miaraka amin'ny basim-borona | Martech Zone
Izaho dia meloka tamin'ny fanonganana ny Manufacturing teto Indiana toy ny tovolahy manaraka ihany. Rehefa mieritreritra asa famokarana aho dia sary an-tsaina ny tovolahy iray any amin'ny efitrano fandrakofana manao ny asan'ny fivorian'ny fivondronana monotone hatrany hatrany. Ny fahitako azy dia mety tsy hafa amin'ny an'ny tanora ankehitriny.
Ny teny fanamboarana sy ny logistika aza tsy teny mahaliana akory. Efa antitra izy ireo. Mankaleo ry zareo. Sarotra ny maka sary azy ireo amin'ny fomba hafa! Ny marina dia ny manamboatra sy ny lozisialy fa tsy mankaleo. Ny famokarana dia mitovy amin'ny mandeha ho azy, mandeha ho azy haingam-pandeha. Logistics dia mitovy amin'ny maodelin'ny rindrambaiko sarotra atambatra amin'ny haitao mivoatra mahavariana toy ny rafitra fampahalalana jeografika.
Ny fanontaniana dia ny hoe maninona ny fanjakana iray manontolo no manova ny fomba fihevitry ny governemanta, ny ray aman-dreny sy ny zanaka momba anao nefa maro ny olona no tsy mahatsapa hoe tena misy ianao? Azo antoka, fampielezan-kevitra momba ny marika, marketing mahazatra ho an'ireo influencer toa ny mpanao politika sy ny mpanabe no hanampy. Fa ahoana no kendrenao hahatratra ny olona ilainao hamenoana asa an'arivony maro ao anatin'ny taona vitsivitsy? Fanontaniana napetraka tamiko io tolakandro io… inona izany!
Amin'ny fanjakana toa an'i Indiana, toerana nipetrahan'ny hubris tao amin'ny oniversite 4 taona (izany no ahafantarana antsika, marina?), Ahoana no hisarihanao talenta tanora amin'ny programa varotra sy ny oniversite mpivarotra 2 taona? Heveriko fa tolokevitra telo sosona izany:
Ny fahazoana antoka fa ny influencer dia hanaiky ny zava-misy mangidy atontan'isa. Ny ankamaroan'ny mpianatra manomboka amin'ny sekoly 4 taona dia tsy mahavita ny diplaomany. Ary amin'ireo izay nahazo ny mari-pahaizana bakalorea… maro no sahirana mahita asa misy dikany. Ny influencer izay miresaka ny mpianatra C + ho fandaharam-pianarana 4 taona dia mety tsy manome azy ireo tombony. Pilina sarotra atelina izany!
Ny fiantohana ny ray aman-dreny hahafantatra ny fotoana mety hifanakalozana hevitra amin'izy ireo amin'ny zanany. Ao amin'ny my zanakalahy sekoly izy dia mpianatra antonontonony - ka ny miaramila no mandondom-baravarana isan'andro. Nanomboka tao IUPUI i Bill fa ankehitriny dia nanjary voninkazo manana mari-boninahitra roa amin'ny Matematika sy Fizika. Manomboka manintona vatsim-pianarana koa izy ary miasa mba hampianarana ny mpianatra hafa ao amin'ny Oniversite.
Ny tiako holazaina amin'ny zanako dia ity - raha tsy nanana ny loharanom-pahalalana ho an'ny fianarany dia afaka niresaka mora foana tamin'ny tafika izy. Izaho dia veterana ary tsy manenina amin'ilay fanapahan-kevitra - saingy tsy tsapako fa nanana safidy tamin'ny taonany aho. Nanana (ary manana) safidy izy! Raha tsy niasa ny fandaharam-pianarana 4 taona dia mety ho prospekety mpivarotra varotra miavaka izy (maninona no ratsy be izany?). Tsy fantatro sy izy anefa izany.
Ny tena fanalahidin'ny ezaka marketing rehetra dia ny tanjona. Eto no mamely ny lalana ny fingotra. Tsy raharahako ny fiantraikan'ny fiantraikany amin'ny influencer sy ny tsenan'ny Reny sy i Dada… raha tsy ampidirinao an-tsambo ireto ankizy ireto dia tsy hahomby ianao. Ka aiza no ahitanao azy ireo? Facebook? Twitter? Finday? Lalao video? Any an-tsekoly? Vondron'ireo tanora?
Eny, hitanao izy ireo na aiza na aiza. Nahavita asa tsara izahay tamin'ny fanabeazana ny zanatsika hanangana ny mombamomba azy, mieritreritra amin'ny fomba hafa, mahita fahasambarana… ka izany no ataon'izy ireo. Afaka mahita ny zanako vavy ianao maka sary ary mizara azy ireo. Katie koa mitsapa horonantsary amin'ny fakantsary Flip. Ary mazava ho azy, amin'ny Instant Messenger sy ny findainy. Indraindray izy dia hiaraka amin'ireo namany ary milalao Rock Band.
My bilaogy zanakalahy (tsindraindray), dia ao amin'ny Facebook ary manatevin-daharana ireo namany mpitendry mozika hafa ao amin'ny MySpace. Ankoatr'izay, ho hitanao eo amin'ny toerana tiany indrindra izy, Ny amboaram-boanjo (nampifandraisiny aho) ary Waffle House… Eny, Waffle House.
Manana safidy ny tanora amin'izao fotoana izao ary miady ho an'ny maha-izy azy manokana. Vitsy dia vitsy, raha misy, ny sakaizan'ny zanako lahy sy vavy vavy no mikomy toa anay tamin'ny mbola kely. Rava izy ireo. Manana kilalao izy ireo. Manana Internet izy ireo. Samy manana izy ireo. Tsy tian'izy ireo ny marika na tantanina. Tian'izy ireo ny maintso. Tian'izy ireo ny hanavotra ny tany… na inona na inona dikan'izany.
Ny fidirana amin'ny tanora amin'izao fotoana izao dia mitaky mihoatra ny fomba fampidirana tsara efa taloha. Tadidiko fa ny hany nataon'i Nike dia ny nihazakazaka ny tanjony vaovao indrindra tao anaty sarimihetsika mba hamelezana ny varotra. Ankehitriny, ny ankizy dia te-hahita ny kiraro kiraro tsy misy olona.
Raha hihaza zatovo ianao dia aleo mitondra basy. manjakazaka Google, Youtube, Flickr, Facebook (mety ho antitra loatra), MySpace, ny sehatry ny mozika, ny magazay, ny lalao video, ny telefaona finday ary ny Coffee Shop na Waffle House eo an-toerana mety ho fanombohana tsara!
Ny torohevitro dia ny hoe mety ho mora kokoa ny manome toerana ho an'ny zatovo be fa tsy mandeha any amin'izay alehany dia. Fantatro fa nankasitraka ny zanatsika avy amin'ny vondrom-paritra tanora sy ny fiangonana izay azon'izy ireo ifaneraserana, firesahana, filalaovana horonantsary, ary mbola nilazana hafatra lehibe ihany izy ireo. Tsy tonga ho an'ny hafatra foana izy ireo fa nifanatrika tokoa! Tsy tokony ho biriky sy mortara io toerana io, mety ho toerana tsara amin'ny Internet.
Ny eritreritrao? Sary sy lahatsoratra tsara momba ny marketing tanora hita ao amin'ny bilaogy fomba fijery.
Tags: sary mihetsika faviconrindrambaiko fihaonambecrunchedVotoatin'ny mailakaEnglishmpamorona favicongotomeeting safidyrindrambaiko fivarotanawebex alternateraWordPress
24 Jun 2008 amin'ny 12:32 AM
Lahatsoratra tsara! Omeo ahy misaintsaina bebe kokoa aho, manana taona maromaro talohan'ny naha-zatovo ny zanako roa, saingy fantatro fa hanidina eo alohan'ny hahalalako azy. Heveriko fa ny zavatra ratsy indrindra ataontsika dia ny manery ny ankizy hiditra amin'ny oniversite rehefa tena tsy vonona amin'izany izy ireo. Misy safidy hafa: miaramila, varotra, fikambanam-panompoana.
24 Jun 2008 amin'ny 10:05 AM
Ary koa, tsy ny rehetra no maniry ny ho ao amin'ny birao na laboratoara tontolo andro. Betsaka ny ankizy voafatotra amina rojo vy eo amin'ny birao nandritra ny 13 taona lasa, izay aleony mifoha sy manao zavatra hafa fa tsy manoratra. Ny fanamboarana dia tsy ho an'ny mpianatra C ihany. Fantatro ny olona marani-tsaina amin'ny asa varotra izay aleony mifoha sy manao zavatra ara-batana.
Mahatonga ahy hieritreritra Office Space izay nahafaly an'i Peter nony farany niasa tamina ekipa mpanadio fa tsy tao amin'ny cubicle.
24 Jun 2008 amin'ny 10:23 AM
Marina tanteraka ianao ary manantena aho fa tsy sendra nilaza fa na izany na tsy izany dia ho an'ny mpianatra ambany ny salan'isa ireo asa ireo. Ny mifanohitra amin'izay fotsiny no resahiko - ireo asa ireo dia samy mahaliana, mandroso ara-teknolojia, mitarika amin'ny karama mandoa tena tsara ary AZA mitaky diplaoma 4 taona. Ny sasany amin'izy ireo dia tsy mila 2 taona akory!
Tena indostria tsy jerena fotsiny io. Mihevitra ny rehetra fa mila fahaizana bakalorea ankehitriny raha te hahomby. Na dia lazaiko aza fa 'politika fiantohana' tsara izany dia mety tsy ny làlana mahafinaritra sy mahavokatra indrindra ho an'ny tanora maniry asa sarotra sy mahafa-po ity!
Misaotra betsaka amin'ny eritreritrao!
PS: tiako ny birao misy ny birao!
Jun 25, 2008 ao amin'ny 7: 35 PM
Ny maha "arivo taona" ahy. mifanaraka amin'ny zavatra rehetra nolazainao teto.
Hihaona amin'izy ireo amin'izay misy azy ireo, ary makà andiana coke miaraka amin'io basim-borona io. Hilainao izany.
Taratasy fandefasana PC inona no dikan'ilay # $ @ #?